Ngaba ujongene nelahleko engalindelekanga yenani elikhulu labalandeli be-Instagram?
Kanye nokuba nengxaki yokuchonga izizathu ezibangela oku ? kakuhle, iyafana nathi. Ndihlala ndizibuza ukuba kutheni ndiphulukana nabalandeli ku-Instagram ngaphandle kwayo yonke imizamo yam nayo yonke into endiyenzileyo ukutsala abalandeli.
Ngaphaya koko, Ndifikelele kwisigqibo sokuba yonke ingxaki idinga isisombululo. Ngoko, kweli nqaku, siya kukunceda uchonge izizathu zokuba ulahlekelwe ngabalandeli bakho be-Instagram kwaye sikuncede uzisombulule.
Kutheni ulahlekelwa ngabalandeli kwi-Instagram ?
Ukuphulukana nabalandeli yinxalenye yendalo yamava e-Instagram kunye nenkqubo yokwakha iakhawunti yakho ye-Instagram.. Asinguye wonke umntu oya kuhlala ewuxabisa umbandela wakho, abanye abantu banokwenza imisebenzi yokulandela kwaye bangayilandeli, kwaye unokwenza izinto ezikhokelela abanye ukuba bangakulandeli ngaphandle kokwazi.
Kodwa ingxaki yile : kutheni ndilahlekelwa ngabalandeli kwi-Instagram ? Ukunika impendulo kulo mbuzo, nous avons fourni ici les 5 raisons possibles pour lesquelles vous perdez une partie ou la plupart de vos followers sur Instagram.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Abantu kwi-Instagram baya bekhetha ngakumbi
I-Instagram ikhona ixesha elide ; inani labasebenzisi liye landa ngokuthe ngcembe kwiminyaka kwaye, ngoko ke, Uninzi lwabantu abathandanayo malunga nohlobo lomxholo abathanda ukuwubona kwisondlo sabo sitshintshile.
Oku kubonisa ukuba unokuphulukana nabalandeli be-Instagram ngenxa yokuthumela umxholo omdala okanye ongabalulekanga..
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Awufane uthumele kwi-Instagram, okanye Rhoqo kakhulu.
Ukuba uqaphele ukuba inani labalandeli kwi-Instagram liyancipha ngokukhawuleza kunokuba likhula, indlela yakho yokuthumela inokuba netyala.
Ukuba awuthumeli rhoqo, ababhalisile bakho abayi kuba nethuba lokufunda umxholo wakho kwiindaba zabo, nto leyo enokubangela ukuba bangabi sakulandela. Kwelinye icala, ukuba uthumela rhoqo, yithi amaxesha amathandathu ngosuku nangaphezulu, iyadika kwaye inokubangela ukuba ababhalisile bakho bayeke ukukulandela.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Uluvo lokuqala Ayilunganga
Imbono yokuqala isisiseko, Uze ulumke ungonakali ! Nakweliphi inqanaba, ngaphandle kweefoto zakho, Into yokuqala ejongwa ngabalandeli abatsha yibio yakho, ke qiniseka ukuba uyigcwalisa ngeembekiselo ezithembekileyo okanye ucaphulo.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Ukunqongophala kokucaca kunye nokuhambelana kumxholo
Ukuba iindaba zakho zondla zilula, ngeefoto ezahlukeneyo kakhulu, imibala engahambelaniyo kunye nemibala kunye nomgangatho womfanekiso oguqukayo, usemngciphekweni wokucima abanokuba ngabalandeli. Kwelinye icala, ukuba unomxholo owodwa kunye nezinto ezingaguqukiyo, Ngokwendalo uya kufumana abalandeli ngexesha. Ke qiniseka ukuba uyadlala ngelixa uhlala ungatshintshi.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Iimpawu ezidikayo okanye ezingathandekiyo
Iifoto ezothusayo zinokuvusa uchulumanco kubalandeli bakho, kodwa ii-captions ezinomtsalane zitsala umdla wabafundi bakho. Ke ngoko, ukuba ii-captions zakho ziyadika okanye azithandeki, ababhalisile bakho baya kuba nesithukuthezi kwaye basenokungakulandeli.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Yiba bhetyebhetye kwaye Uziqhelanise noTshintsho
Utshintsho alunakuphepheka, ngakumbi kweli lizwe liphuhlayo nakwi-Instagram. Ngoko funda ukuziqhelanisa neentsingiselo ezintsha kwaye ube bhetyebhetye kwindlela yakho yokuya kuzo.. Yenza kwaye wabelane ngomxholo ohamba phambili kunye nezihloko kwisondlo sakho, kwaye ngokungathandabuzekiyo uya kufumana inani elikhulu labalandeli.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Yiba Nesikhundla Esilungeleleneyo NesiQoqo
Njengoko uthumela rhoqo kwisondlo sakho, abalandeli bakho baya kuqala ukufunda kwaye baqhelane ngakumbi nomxholo ngamnye, ngakumbi ukuba inomtsalane. Ngoko, yiba nomsebenzi olungeleleneyo nothe rhoqo de 1 à 2 posts par jour, kwaye inani labalandeli bakho liya kwanda.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Iprofayile eyaziwayo
Ilula : konke okudingayo kukutsala amehlo kunye neefoto ezisemgangathweni, kunye neereferensi kunye neziqinisekiso ezithembekileyo kwiprofayile yakho. Ngele ndlela, abantu abakulandelayo baya kufuna ukukulandela.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Ungaguquguquki kwaye uchaneke kumxholo wakho
Ukutshintsha umxholo kudla ngokucaphukisa. Ke ngoko, ube nomxholo ochanekileyo xa uthumela kwi-Instagram ; hlala kumxholo omnye kwaye udlale umdlalo. Unako, nangona kunjalo, ukulungisa umxholo wakho ngokusekelwe kwiziganeko zekhalenda., njengoSuku lweValentine kunye nabanye.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000.	Yenza Intsomi enomdla kunye neQhelekileyo
Umfanekiso omnye wodwa awonelanga ukuqokelela abalandeli ; nawe ufuna ilivo. Ukuba nezihloko ezinomdla kunceda ukutsala kwaye ugcine abalandeli abaninzi kwiakhawunti yakho. Oku kubalulekile kuwo onke amaqonga eendaba ezentlalo, ke yenza intsomi eya kubangela umdla wabalandeli bakho bangoku kunye nekamva.
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaUzikhuphela njani iividiyo ze-Instagram kwi-iPhone yakho : guqula ngokulula nayiphi na iakhawunti ye-Instagram